Tresaka Archives -
Noho ny fisian’ilay fahitalavitra lehibe nokasain’ny KMMR namoahana ny marina rehetra momba ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no nahatonga ny Préfet n’Antananarivo nanao izay fomba rehetra nentina nanakanana ireo vahoaka tsy niditra ny kianjan’ny 13 …Tohiny
« Misora-tena toa voatango »
Iaraha-mahalala fa mbola vokatra vonjimaika ihany no navoakan’ny CENI raha fifidianana no resahina. Izany hoe tsy mbola misy kandidà afaka misora-tena ho efa lany taorian’iny vokatra vonjimaika iny. Aorian’ny vokatra ofisialy havoakan’ny HCC mantsy vao …Tohiny
Niara-nahita angamba isika fa niseho ho olon-kendry avokoa ry Rajoelina mianakavy omaly tetsy amin’ny CENI. Tahaka ireny hoe olona manana toetra miavaka, mihaja ary matotra sy manana fahamendrehana. Ireny fihetsika nataon-dry Rajoelina sy ny firongony …Tohiny
« Fa ny hosoka no lehibe indrindra… »
Tokony hovan’i Andry Rajoelina ilay hoe “Fa ny Fitiavana no lehibe indrindra…”, nentiny namitaham-bahoaka teto nanomboka tamin’ny Tetezamita. Tsy izany velively mantsy no zava-misy ankehitriny “fa ny hosoka no lehibe indrindra…”. Milamin-tsaina sy mahita fahasambarana …Tohiny
Betsaka ireo olom-pirenena resy lahatra amin’ny fampandrosoana nentin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery teto amin’ny firenena tao anatin’izay efatra taona mahery nitondrany an’i Madagasikara izay, tamin’ny alalan’ny fametrahana sy fanamboarana ireo fotodrafitrasa fototra manerana ny Nosy. Araka ...Tohiny